Dibadbax ka dhacay caasimadda Tigrey ee Mekelle | Allbalcad Online
Home CAALAMKA Dibadbax ka dhacay caasimadda Tigrey ee Mekelle
Dibadbax ka dhacay caasimadda Tigrey ee Mekelle
Wararka ka imanaya gobolka Tigrey ee Waqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya in hal qof halkaasi lagu dilay.
Qofkan ayaa ka mid ahaa dad dibadbax dhigayay oo isugu soo baxay caasimadda gobolka Tigrey ee, Mekelle.
Booliska ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha oo ka soo horjeeday dowladda islamarkana waxaa ay rasaasta haleeshay hal qof oo ku dhintay.
Dibadbaxa ayaa ku soo beegmay xilli hogaamiyayaasha gobolka Tigrey ay booqdeen magaalada Mekelle ee xarunta gobolka Tigrey.
Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in ganacsiyo badan ay wali xiran yihiin.
Qalalaasaha Tigrey: Itoobiya ma waxay minjaxaabisay ururka Midowga Afrika?
Colaadda Tigrey: “Laba dhinac ayaa nagala soo duqeeyay”
Previous articleKenya oo ka digtay in uu dheraado khilaafka kala dhaxeeyo Soomaaliya
Next article(SAWIRRO) Tababarka Faafinta Manhajka Qaranka oo Kafurmay Degmada Balcad